သူကပြုလုပ်သည် - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2019-01 > သူကစီမံခန့်ခွဲ
အတွင်း၌နက်ရှိုင်းစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအလွန်တောင့်တကြသည်ဟုခံစားရသော်လည်းမသေချာမရေရာမှုနှင့်အရူးအမူးဖြစ်ခြင်းတို့ဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်များပြားသောသတင်းအချက်အလက်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးလာနေသည်။ အဘယ်သူသည်နေဆဲလူတစ် ဦး ယုံကြည်နိုင်ဘယ်အရာကိုသို့မဟုတ်ဘယ်သူကိုသိတယ်? များစွာသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမားများကလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများသည်၎င်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးနေသည်ဟုခံစားရသည်။ ရှုပ်ထွေးသောဤလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းကူညီနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မခံစားရပါ။ ဒီအချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ တရားစီရင်ရေးကိုလူအများကယုံကြည်မှုနည်းပါးလာသည်။ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရာဇ ၀ တ်မှု၊ နိုင်ငံရေးပယောဂနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသည်လူတိုင်း၏လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာစက္ကန့် ၃၀ တိုင်းရေရှည်ကြော်ငြာတွေကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်မိနစ်ကျော်ကျော်စကားပြောတဲ့အခါစိတ်မရှည်ဘူး။ ငါတို့ဟာတစ်ခုခုကိုမကြိုက်တော့ဘူး၊ အလုပ်တွေ၊ တိုက်ခန်းတွေ၊ ဝါသနာတွေ၊ ယခုအချိန်တွင်ရပ်တန့်ရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်ခက်ခဲသည်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စရိုက်အတွင်း၌နက်ရှိုင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလျင်မြန်စွာကျော်လွှားနိုင်သည်။ ရုပ်ဝါဒ၏ရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေသည့်“ နတ်ဘုရားများ” ကိုပေးအပ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဤလောကတွင်ဘုရားသခင်သည်မိမိအားနိမိတ်လက္ခဏာများ၊ အံ့ဖွယ်အမှုများများစွာဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်သူ့ကိုမယုံကြ။ တစ်ချိန်ကမာတင်လူသာကဤသို့ပြောဆိုခြင်းသည်အံ့ဖွယ်အမှု (၃) ခုပါ ၀ င်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် -“ ပထမမှာဘုရားသခင်ဖြစ်လာသည်။ အပျိုကညာတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးဒုတိယနှင့်အပျိုစင်ဘဝကိုလူအများယုံကြည်ကြသည်တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။
Der Apostel Paulus schrieb über Jesu Kommen an die Gemeinde in Korinth: «Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi» (2. ကောရိန္သု 4,6). Betrachten wir nachfolgend, was der Prophet Jesaja im Alten Testament über die Wesensmerkmale Christi, des «Gesalbten» (griech. Messias) für uns aufgeschrieben hat:
«Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heisst Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft gross werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth» (Jesaja 9,5-6) ။
Er ist buchstäblich der «Wunder-Ratgeber”. Er gibt uns Trost und Stärke für alle Zeit und Ewigkeit. Der Messias ist selbst ein «Wunder». Das Wort bezieht sich auf das, was Gott getan hat, nicht was Menschen getan haben. Er selbst ist Gott. Dieses Kind, das uns geboren wurde, ist ein Wunder. Er regiert mit unfehlbarer Weisheit. Er braucht keinen Berater oder ein Kabinett; er ist selbst Berater. Brauchen wir Weisheit in dieser Stunde der Not? Hier ist der Berater, der diesen Namen verdient. Er bekommt kein Burnout. Er befindet sich immer im Dienst. Er ist die unendliche Weisheit. Er ist der Treue würdig, denn sein Rat geht über menschliche Grenzen hinaus. Jesus lädt alle ein, die einen wunderbaren Ratgeber brauchen, zu ihm zu kommen. «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht» (Matthäus 11,28-30) ။
Für diejenigen, die um ein positives Vaterbild ringen – hier ist derjenige, der diesen Namen verdient. Wir können vollkommene Sicherheit in einer engen Liebesbeziehung mit unserem ewigen Vater haben. Der Apostel Paulus ermahnt uns im Römerbrief mit diesen Worten: «Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, von neuem zur Furcht, sondern habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen: "Abba, Vater!" Ja, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben – Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden; dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben» (Römer 8,15-17 NGÜ)။
ကျွန်ုပ်တို့၏မလုံခြုံမှုများကိုဖယ်ရှားပြီးဉာဏ်ပညာပေးမည့်သူကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏အံ့ဖွယ်အမှုပျောက်ဆုံးသွားပြီလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အချိန်တွင်အသက်ရှင်နေသည်ဟုခံစားရပါသလော။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့ဖွယ်အကြံပေးချက်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌နှစ်မြှုပ်။ သူ၏အကြံပေးချက်အံ့ဖွယ်ရာကိုနားထောင်ကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လျှင်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသည်။ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည့်လုံခြုံမှုကင်းသောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကူအညီမဲ့နေသည်ဟုခံစားရပါသလော။ ငါတို့တစ် ဦး တည်းမထမ်းနိုင်လောက်အောင်ကြီးလေးသောဝန်ကိုထမ်းနေပါသလား။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ သူမလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး ယုံကြည်ကိုးစားသူတိုင်းကိုသူကယ်တင်နိုင်သည်။
ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရထာဝရအဘရှိလိမ့်မည်။ ငါတို့ကမိဘမဲ့တွေလို့ခံစားရလား ခုခံကာကွယ်လို့မရဘူးလား။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမြဲချစ်သော၊ ဂရုစိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုကတိသစ္စာပြုသူတစ် ဦး ၌ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခမည်းတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်၊ သခင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ထာဝရစိတ်ချရကြ၏။
ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လျှင်၊ ငါတို့သည်ကြောက်။ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမရကြသလော။ ခက်ခဲကျပ်တည်းသောကာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုးထိန်းတစ် ဦး လိုအပ်သလော။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုနက်ရှိုင်းစွာတည်မြဲသောအတွင်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုပေးနိုင်သူတစ် ဦး တည်းသာရှိသည်။